तपाईंको कानून फर्म वेबसाइटमा समावेश गर्न महत्वपूर्ण वेब डिजाइन प्रविधिहरू Martech Zone
आजको कानूनी बजार प्रतिस्पर्धी हो। नतिजाको रूपमा, यसले प्रतिस्पर्धाको बाँकी भागबाट बाहिर निस्कन धेरै वकिल र कानून फर्महरूलाई धेरै दबाब दिन्छ।
यो कठिन छaको लागी प्रयास गर्नु व्यावसायिक उपस्थिति अनलाइन। यदि तपाइँको साइट पर्याप्त बाध्यकारी छैन, ग्राहकहरु तपाइँको प्रतिस्पर्धीहरु मा लाग्छ।
त्यसकारण, तपाईंको ब्रान्ड (र त्यसले तपाईंको वेबसाइट समावेश गर्दछ) ले तपाईंको व्यवसायलाई उल्लेखनीय रूपमा प्रभाव पार्छ, नयाँ ग्राहकहरू फेला पार्न मद्दत गर्दछ, र तपाईंको राजस्व बढावा दिन्छ।
यस पोष्टमा, हामी तपाईंलाई आवश्यक वेब डिजाईन प्रविधिहरू मार्फत लैजान्छौं जुन तपाईं आफ्नो कानून फर्म साइटमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ:
अरू केहि पनि पहिले योजना बनाउनुहोस्
तपाइँको वेबसाइट तपाइँको कानून फर्म, तपाइँको अभ्यास प्रतिनिधित्व गर्दछ - तपाईको ब्रान्डजब वेब प्रयोगकर्ताहरू तपाइँको साइट पहिलो पटक भ्रमण गर्छन्, तिनीहरूसँग पहिले नै पहिलो प्रभाव बनिएको हुन्छ।
त्यसोभए, यदि तपाईं गलत टेम्प्लेट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंको साइट इन्टरनेटमा सयौं अन्य फर्महरूसँग मिल्दो देखिन्छ भने तपाईं श्रोताको साथ अनौंठो प्रभाव पार्न असफल हुनुहुनेछ।
यदि ग्राहकले तपाइँलाई किन सम्झना गर्दछ यदि तपाइँको साइट दर्जनौं अन्य फर्महरू जस्तै उनीहरू आउँदछन् जस्तो देखिन्छ?
त्यसोभए, त्यस अनुसार योजना बनाउनुहोस्। यहाँ केहि सुझावहरू छन्:
कम बढी छ। तपाईंको वेबसाइट पाठ र छविहरूको साथ न भर्नुहोस्। यसको सट्टामा, पक्षहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् जुन तपाईंको सामग्रीलाई पढ्न योग्य र बाध्यकारी बनाउँदछ।
आगंतुकहरूले फरक मोबाइल उपकरणहरूमा पहुँच गर्न कोशिस गर्न सक्दछन्। त्यसोभए, तपाईंको साइट पृष्ठहरूमा फ्ल्यास एनिमेसन जटिल सुविधाहरू थप्ने बेवास्ता गर्नुहोस्। साथै, तपाइँका पृष्ठहरू त्यस्तो तरीकाले डिजाइन नगर्नुहोस् जुन केवल ठूला स्क्रीन आकारका लागि फिट हुन्छ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग एक पेशेवर लोगो डिजाइन छ। निश्चित गर्नुहोस् कि यो अद्वितीय छ; अन्यथा, तपाईं एक कमजोर छाप सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस बाहेक, तपाइँले पर्याप्त कानूनी जोखिममा तपाइँलाई उजागर गर्न सक्नुहुन्छ।
परीक्षणहरू चलाउनुहोस्। कस्तो प्रकारको सामग्री, र colors्ग, र बटनहरूले तपाइँलाई अधिक क्लिकहरू कमाउँदछन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुहोस्।
तपाईंको प्रयोगकर्तालाई कार्य गर्न मनाउनुहोस्। तपाइँको प्रयोगकर्ताले के प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कार्यको बारे सोच्नुहोस् प्रमुख कल-टु-एक्शन.
तपाईंको सामग्रीमा फोकस गर्नुहोस्
यदि तपाईं यसलाई अहिले सम्म सचेत हुनुहुन्न भने, खोज इञ्जिनहरू लिंक र सामग्री गुणस्तरमा आधारित अनुक्रमणिका साइट। त्यसोभए, तपाईले प्रकाशित गर्नुभएको अधिक सामग्री, यो खोजी इन्जिनहरूका लागि बढी आकर्षक हुनेछ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सँधै ताजा, आकर्षक, र उच्च-गुणवत्ता सामग्री प्रकाशित गर्दै हुनुहुन्छ। संभावनाहरू छन्, खराब सामग्री हुनुले साइट साइट आगन्तुकलाई तपाईंको साइट छोड्नेछ।
यसबाहेक, शक्तिशाली हेडलाइट्स क्राफ्टिंगको अवमूल्यन नगर्नुहोस्। वेब साइट आगन्तुकले तपाईंको बाँकी सामग्री पढ्ने वा तपाईंको साइट छोड्ने बिचमा भिन्नता ल्याउन सक्छ।
तपाईंको नेभिगेसनको बारे सोच्नुहोस्
तपाईंले सजिलै नेभिगेसन योग्य वेबसाइटको लागि प्रयास गर्न आवश्यक छ। निश्चित गर्नुहोस् कि यो पनि छ सबै प्रकारका उपकरणहरूमा उत्तरदायी - स्मार्टफोन, ट्याबलेट, डेस्कटप कम्प्युटर, आदि बाट।
यहाँ सुनिश्चित गर्न विचार गर्नको लागि अन्य चीजहरू छन् जुन तपाइँ प्रयोग गर्न सजिलो साइट बनाउनुहुन्छ:
प्राथमिक नेभिगेसन अनावश्यक लिंकबाट निःशुल्क राख्नुहोस्।
यसलाई हेर्नुहोस् कि तपाईंको सामग्री पढ्न सजिलो छ।
अन्य अलमल्याउनेहरूलाई कम गर्नुहोस् जस्तै पपअपहरू, एनिमेशनहरू, भिडियोको अटोमेटिक्स प्ले र अन्य मल्टिमेडिया सामग्री, र अधिक।
यदि तपाईं निराशाजनक र प्रयोग गर्न गाह्रो साइट सिर्जना गर्नुहुन्छ भने, तपाईं सम्भावित ग्राहकहरूलाई टाढा गर्नुहुनेछ। यो तपाईलाई नहुन भनेर निश्चित गर्न, अन्वेषण गर्न सजिलो साइटको लागि लक्ष्य राख्नुहोस्।
सँधै सान्दर्भिक छविहरू प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईको साइटमा छविहरू थप्दा, स्टक फोटोग्राफी छनौट गर्दा अझ बढी सरल विकल्प देखिन्छ। तर यसमा यसको कमी पनि छ। संभावना छ, यी पहिले नै सयौं द्वारा प्रयोग गरीएको छ (यदि हजारौं होइन) अन्य कानून फर्महरूको।
यदि तपाईं बाँकी प्याकबाट बाहिर निस्कन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले उच्च-रिजोलुसन छविहरू प्रयोग गर्नु पर्छ जुन तपाईंको ब्रान्डमा अधिक व्यक्तिगत हो।
त्यसोभए, यी छविहरूमा तपाईंको कार्यालयहरू र तपाईंको टीमलाई किन देखाउँदैन? यसले तपाईको ब्रान्डलाई पनि मानवीय बनाउँछ।
उदाहरण को लागी, तपाईं आफ्नो वकील वा आफ्नो कार्यालय लबी को फोटोग्राफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्नाले तपाईंको साइटमा न्यानो र अझ आकर्षक बनाउँदछ।
ग्राहक प्रशंसापत्र सम्मिलित
अनुसार अमाजेला - केहि व्यक्ति सल्लाह र अन्य ग्राहकहरु को प्रशंसापत्र को आधार मा कानून फर्महरु मूल्यांकन गर्न को लागी गर्छ। प्रशंसापत्र सामग्री मार्केटिंग रणनीति को सबैभन्दा शक्तिशाली रूप हो। त्यसैले यसलाई तपाईंको फाइदाको लागि प्रयोग गर्न नडराउनुहोस्।
तपाईं आफ्नो गृहपृष्ठमा प्रशंसापत्रहरू राख्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको वेबसाइटमा एक अलग पृष्ठ सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। यसका अतिरिक्त, तपाइँ तपाइँको वकील प्रोफाइल मा पनि यी फिचर गर्न सक्नुहुन्छ।
एक एसईओ-तैयार वेबसाइट छ
तपाईंको साइट खोजी ईन्जिनहरूका लागि अप्टिमाइज हुनु आवश्यक छ ताकि तपाईं कार्बनिक ट्राफिकको फाइदा उठाउँदै हुनुहुन्छ।
यहाँ SEO को लागी दिमागमा राख्नको लागि केहि चीजहरू छन्।
कीवर्ड स्टफिंगलाई बेवास्ता गर्नुहोस् किनकि यसले गुगललाई खोजी साइटमा लैजान सक्छ जस्तो तपाईंको साइटलाई दण्ड दिईएको छ।
छविहरूको लागि alt टेक्स्ट र उचित नामहरूको उपयोग गर्नुहोस् किनभने यसले खोज ईन्जिनलाई तपाईंको सामग्री अझ राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्दछ। यसका साथै तपाईका पाठहरूका लागि उचित ढाँचा पनि प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईंको लिंकहरूको लागि "यहाँ क्लिक गर्नुहोस्" वा "यसलाई क्लिक गर्नुहोस्" प्रयोग गर्नुको सट्टा, प्रासंगिक वर्णनहरू प्रयोग गर्नुहोस्, किनकि यसले पाठकहरूलाई तपाईंको लिंक को बारे मा के हुन्छ भनेर बुझ्दछ। यसले खोजी ईन्जिनहरूलाई यो पनि थाहा गर्दछ कि तपाईं प्रासंगिक स्रोतहरूमा लिंक गर्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न।
ठीक छ, त्यसैले त्यहाँ तपाईं यो छ! आशा छ, यी सुझावहरूले तपाईंलाई एक आकर्षक र अद्वितीय कानून फर्म वेबसाइट सिर्जना गर्न सही दिशामा राख्नेछ जुन तपाईंको वेब आगन्तुकहरूलाई दीर्घकालीन ग्राहकहरूमा बदल्नेछ।
टैग: कानुनी फर्मकानून फर्म वेबसाइटहरुवकिल वेबसाइटहरुमोबाइल उत्तरदायीएसईओवेब डिजाइन